INDRAY andro dia nilaza tamin’ny lehilahy iray i Jesosy fa tokony ho tia ny namany izy. Nanontany an’i Jesosy ilay lehilahy hoe: ‘Iza no namako?’ Eny, fantatr’i Jesosy izay noeritreretin’io lehilahy io. Nihevitra io lehilahy io fa ny olona mitovy foko sy fivavahana aminy ihany no namany. Koa aoka hojerentsika izay nolazain’i Jesosy taminy.
Hizara Hizara Ny Fomba Fampianatr’i Jesosy
my tant. 95